Ukulungiselela "Cha-Spa" limelela indlela ephumelelayo ngokumelene ubuhlungu nemvelo spastic. izidakamizwa Active kwalo kungukuchotshozwa drotaverine eziphathelene miotropnym antispasmodics. Lolu hlobo amalungiselelo nomphumela ngqo phezu bushelelezi imisipha amaseli. Ngaphezu isidakamizwa "Cha-spa" Drotaverinum kuhlanganisiwe nezinye izidakamizwa, "Spazmola", "Pentalgin" "Kodwa-shpalgina", "Spazmoneta", "Yunispaza".
Ukulungiselela "Cha-spa", contraindications ukusetshenziswa lapho kwaziwa kahle itholakala ifomu tablet futhi isixazululo esicutshini futhi imijovo emthanjeni. Omunye sibhebhe sinamaphutha 40 mg drotaverine. Isixazululo for umjovo ihlinzekwa e izitsha eziyisikhombisa 2 ml, ngamunye equkethe 40 mg lomcebo asebenzayo. Ukudayiswa futhi izici zomuthi "Cha-spa Forte" - izibhebhe 80 mg Drotaverinum. On ukusebenza ekunciphiseni izinhlungu zibe nobubanzi izicelo bezokwelapha babe izidakamizwa ehlukileko esekelwe ke kuze kube manje ayitholakali.
"Cha-spa" unethonya sizipholele imisipha bushelelezi kwezitho urogenital, wokugaya ukudla bese izinhlelo kwegazi. Ngaphezu kokususa zibe izindlela ukuthuthukisa kwegazi izicubu. Ngenxa impahla yayo izidakamizwa "Cha-spa," okuyinto contraindication ukuba ukusetshenziswa kahle waqonda, asetshenziswa kabanzi emikhakheni ehlukahlukene imithi. Ngokwesibonelo, e zabesifazane ke ezinqunyiwe esikhathini okubuhlungu futhi ngesikhathi sokukhulelwa - uma usongo ukuphazamiseka. "Cha-spa" livame ukusetshenziswa ngesikhathi sokubeletha: kusebenta njengesikhali antispasmodic, lokhu izidakamizwa ikhuthaza ukudalulwa ngokushesha wesibeletho futhi kanjalo kunonophisa luhlelo ukulethwa.
Ezahlukene isicelo futhi Gastroenterology - .. kolwelwesi, gastroduodenitis, nesifo, enteritis, izifo Bile Amapayipi kanye nenyongo sesinye, njll Umuthi, "Cha-spa" nganoma iyiphi indlela liphumelele ekunciphiseni amajaqamba kwezinso, biliary futhi colic emathunjini bese nge cystitis kanye pielitah. Ngaphezu kwalokho, uyangiduduza abalulekile ngenxa yekhanda kubangelwa spasm semithambo, kuhlanganise migraines. Ekugcineni, lapho isifo occlusive - ukuvaleka ezingamahlalakhona imithambo wemikhawulo, kuphumele eside iziyaluyalu esiyingozi kwegazi kuzo, futhi wasebenzisa isidakamizwa "Cha-spa." Izimo ukusetshenziswa kwaso, okungakwazi kucatshangelwe, ungalukhanseli izinzuzo umkhiqizo: kuyaphumelela kakhulu futhi batusa nodokotela abaningi bezokwelapha.
esiphezulu I umthamo zonke izinsuku we "Cha-Spa" zomuthi kuyinto 240 mg abadala, 160 mg intsha engaphezu kwengu-12 ubudala futhi 80 mg izingane abaneminyaka engama 6. Ngokuvamile ihlukaniswe yaba 2-4 Ukweqiwa. Ukuze ekwelapheni izingane zisebenza iphilisi kuphela "Cha-Spa", umjovo izidakamizwa kungukuthi ngokuvamile zinikwa. Ekuzalweni ngokuvamile kungaholela 40 mg isixazululo intramuscularly. Uma kungekho ukusebenza iyaphindwa ukuphathwa kwalo umthamo ngemuva kwamahora amabili.
Ukulungiselela "Cha-Spa" Izimo ukusetshenziswa zazo zichazwe ngokuningiliziwe e imiyalelo njengoba yimuphi izidakamizwa akufanele lisetshenziswe khona hypersensitivity kuya isithako yayo iyasebenza noma izingxenye asizayo. Ngaphezu kwalokho, reception yayo akuvunyelwe ngoba inhliziyo, izinso kanye yokwehluleka kwesibindi. Phakathi nenkathi yokukhulelwa, it is ebekiwe ngenxa yezizathu ezithile kuphela - ukuthatha izidakamizwa ngalesi sikhathi, "Cha-spa" ngokusuka kuzo ukuze kube lula, isibonelo, ukuphathwa ikhanda, akuvunyelwe nakancane. Akumele kusetshenziswe ngesikhathi lactation, njengoba izifundo zokwelapha izenzo zakhe zazingafani eyenziwa phakathi nalesi sikhathi.
Nakuba kokuthatha lesi izidakamizwa, kufanele acabangele ekuxhumaneni yayo nezinye izidakamizwa. Ngakho, "Cha-spa" iyehlisa umphumela izidakamizwa ngesisekelo levodopa, yasetshenziswa ekwelapheni iziguli Parkinson. Ngezinye reception kanyekanye nabanye antidepressant ithuthukisa ukusebenza kwabo hypotensive. Ngakho-ke, uma kudingeka, thola antispasmodic "Cha-spa" kuyadingeka ukubeka udokotela uyazi ngazo zonke imithi kuthathwe yisiguli ngokulinganisa.
Umuthi 'Raunatin ": lokho kusiza? Incazelo izakhiwo kanye nokusungulwa
"Gel Isishoshovu": imfundo, isicelo kanye nokubuyekeza
Umuthi 'Ketonal "(ukhilimu) - ubuhlungu emalungeni nezicubu ezikhoselweni